नाजी जर्मनी भन्दा नराम्रो पुलिस राज्य भेडाको लुगामा ब्वाँसो जस्तै देखिन्छ र तपाईं यो देख्नुहुन्न: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	14 नोभेम्बर 2019 मा	• 21 टिप्पणिहरु
हामी पुलिस राज्यमा गइरहेका छौं जहाँ हामी पहिला अभिनय मार्फत न्यायशास्त्र लागू गर्दछौं, र त्यसपछि कानून बमोजिम समायोजन गर्दछौं। केही साइकोप वकिलहरू मनोवैज्ञानिक आपरेशनमा सहयोग पुर्‍याउने क्यायरियर पछि टेबलको अर्को पट्टि सर्छन् (नयाँ विधानमा योगदान पुर्‍याउने कलाकारहरूको डिफेन्डरको रूपमा) र साइकोप न्यायाधीश बन्छन्। ती न्यायाधीशहरूको नयाँ केस कानून स्थापना गर्ने काम हुन्छ, जसमा कानून बन्न सकिन्छ।
बार्ट स्ट्यापर्ट हो राम्रो उदाहरण यस्तो वकिलबाट जसलाई सर्वप्रथम एउटा प्रोक्सी अपराधीलाई ताजको गवाह बन्न सहयोग गर्ने अनुमति दिइयो र अब मान्छेलाई न्यायाधीशको रूपमा सजाय दिन सक्छ। उनको अन्तिम ग्राहकहरु मध्ये एक ताज साक्षी नाबिल बी थियो, जसको गैर-आपराधिक भाईलाई एक्सएनयूएमएक्समा खारेजी गरियो (कथा अनुसार)। एन्ड्रोइड एम्स्टर्डममा लागुऔषध संसारको बारेमा गरिएको मुद्दाको नाबिल बी मुख्य गवाही थियो। ड्रग संसार जसलाई तपाईं तुलना गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाले एक पटक कसरी स्थापना गरे, प्रशिक्षित र सशस्त्र अल कायदा, र कसरी सिरिया र अन्य धेरै युद्धहरू प्रोक्सी सेना संग काम गरेको छ देश कडा हस्तक्षेप को लागी Alibi बनाउन अस्थिर गर्न। एम्स्टर्डम ड्रग संसार, तथाकथित मोक्रो माफिया, सायद एक स्वयं-निर्मित प्रोक्सी सेना पनि हो। एम्स्टर्डम मोक्रो माफिया AIVD को IS हो; डच राज्यको प्रोक्सी सेना, नयाँ पुलिस राज्य उपायहरू परिचय गर्न। अराजकता आफैं सिर्जना गर्नुहोस्, ताकि तपाईले कडा हस्तक्षेप गर्नु पर्छ।
मोक्रो-माफिया प्रोक्सी अपराध को लागी "ताज साक्षी" भनिने डराउने प्रहरी उपाय अन्ततः सबैले स्वीकारेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदान गरेको छ। मुकुट साक्षी सिद्धान्तको अस्तित्वले राज्यले प्रत्येक अपराधको लागि अनुकूलित गवाही दिन सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ। यसका लागि आपूर्ति गरिएको साक्षी त्यसपछि अज्ञातमा हराउन सक्छ। अभिनय कार्य सम्भवतः यतिसम्म सम्पन्न हुनेछ कि साक्षीको नाम पनि बाहिर आउन नपरोस्, अन्यथा परिवारका सदस्यहरू र वकिलहरू मारिनेछन्। त्यसोभए तपाईं अज्ञात साक्षीबाट मेक-अप गवाहीका साथ सबैलाई सलाखहरू पछाडि राख्न सक्नुहुन्छ।
त्यो तल्लो रेखाको बारेमा हो जहाँबाट अब यो पठाइन्छ। के तपाई त्यो हेर्न चाहानुहुन्न? त्यसोभए तपाईंसँग अझै टाउको बालुवामा छ। मुकुट साक्षीको यो सिद्धान्त प्रोक्सी अपराधी विलेम होलीडेडर मार्फत पहिले नै लागू गरिएको थियो, तर अभिनय कार्य अब यस्तो हदसम्म बढ्नुपर्दछ कि कानूनी पेशा आफैंले यसलाई विश्वास गर्ने छ। यसबाहेक, यदि तपाईं वास्तवमै सस्तो र सजिलो मानिसहरूबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ती सबै अत्यन्त महँगो सुरक्षा कार्यक्रमहरू राख्नुपर्दैन। त्यसकारण यो स्वीकार गर्न श्रेयस्कर छ कि सम्पूर्ण प्रक्रियामा एक मुकुट साक्षी अज्ञात रहन सक्छ। यदि यो प्राप्त गर्न असफल भयो भने, त्यसपछि केवल ती महँगो सुरक्षा कार्यक्रमहरू ट्याक्स पोटाबाट बाहिर तान्नुहोस्। र हामी केवल यो लाग्छ कि यो खतरनाक अपराधीहरु लक गर्ने बारे हो। होईन, हुनसक्छ प्रोक्सी अपराधीहरू जो एक मनोवैज्ञानिक अपरेसन (PsyOp) को फिल्म स्क्रिप्टमा भाग लिए।
उही अभिनयमा (वर्णन गरे अनुसार मेरो अघिल्लो लेख) यसै बीचमा, रक्षाको लागि खर्च भत्ता (राज्यबाट छुटकारा पाउन चाहनेहरूको) पनि आवश्यक छ विलेम होलीलेडर जस्ता व्यक्तिहरुलाई यसले धेरै पैसा खर्च गरेको छ। त्यो सबै 'थप' मा भयो र त्यसैले वकिल शुल्कहरू सबै राज्य द्वारा भुक्तान गरियो। हो, यो त्यस्तै प्रोक्सी अपराधी मार्फत कार्य गर्ने ठ्याक्कै उद्देश्य थियो। यसले धेरै खर्च गर्नुपर्‍यो, ताकि राज्यले यसो भन्न सक्दछ:त्यो अब सम्भव छैन। हामी त्यो पैसालाई मुकुट गवाह वा उसको वकिलको वरपर संरक्षण कार्यक्रमका लागि अझ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दछौं"।
संक्षेप मा, सबै ठाउँ लक गर्न को लागी सबै ठाउँ बनाईएको छ र सबै जसको लागि राज्यले जुत्तामा अपराध राख्न सक्छ। त्यो कुनै अस्तित्वमा रहेको अपराध हुनु हुँदैन, किनकि यदि तपाईंसँग कुनै मुकुट साक्षी छ भने तपाईंले अब समर्थन प्रमाणहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्दैन। NFI एक अनुकूलित रिपोर्ट लेख्न सक्छ र मुकुट साक्षी राज्य को लागी एक अनुकूलन को रूप मा अनुकूलित वाक्य व्यवस्था। त्यसो भए तपाईले सम्पूर्ण अपराध र साक्षीलाई तपाईको औंठाको बाहिर बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबै गुमनाम रूपमा र बन्द ढोका पछाडि जान्छ। आतंक पुलिस राज्य को शुरुआत! तर त्यो सबै छैन।
मनोचिकित्साकरण गरेर समाजबाट असन्तुष्टहरूलाई कसरी छुटकारा पाउने? मैले विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको छु यो लेख। यो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु भयो र यसलाई तपाईंको प्रवेश गर्न दिनुहोस्। त्यो किनभने तपाईंले आज वा भोलि आफैंलाई असर गरिरहनु भएको छ। यसले तपाईलाई छुन्छ; यसले तपाईंको बच्चाहरूलाई असर गर्न सक्छ। यो सम्भावित भ्रमात्मक व्यवहारको रूपमा वर्णन गरिएको सम्भावित विचलनित विचारहरूको मामलामा अवलोकनको लागि कैदीको बारेमा छ। रुईनरवल्ड 'भूत परिवार' PsyOp यसको लागि सेवा गर्‍यो। सम्पूर्ण लेख र फेरि टिप्पणीहरूको माध्यमबाट पढ्नुहोस् लिंक क्लिक गर्दै.
हामी सबै प्रकारको मोर्चाहरूमा श्रेणीहरू बन्द भएको देख्छौं। खोप कार्यक्रम बिस्तारै अनिवार्य हुँदै गइरहेका छन्। 5G आउँदैछ। अवश्य पनि हामी सबै मोर्चामा प्रतिरोध देख्छौं, तर यो अब महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यी सबै विपक्षीहरू राज्यले नै संगठित गरेको छ, यसलाई प्रसारण गर्नका लागि। धेरै जसो प्रदर्शनहरू राजनीतिक नेताहरू हुन्, तर ती राजनीतिक नेताहरू त्यहाँ मात्र 1 उद्देश्यका लागि हुन् र त्यो हो: सबैलाई द्रुत रेलमा धकेल्नुहोस्.
आत्म-संगठित प्रतिरोधको उद्देश्य, एकातर्फ, ध्यान बदली गरेर र सँधै चीजहरू हातबाट नकिनु भनेर सुनिश्चित गरेर वास्तविक समस्याहरू लुकाउनु हो। यो सबै कुरा समाजबाट प्रतिरोध जगतको बारेमा हो। यदि तपाईं त्यसलाई आफैं पठाउन सक्नुहुनेछ, तपाईं जहाज किनारमा पठाउन सक्नुहुनेछ। मेरोमा नयाँ पुस्तक म कसरी विस्तृत रूपमा नियन्त्रण गर्दछ यसले कार्य गर्दछ र कसरी छलको सबै तहहरू संरचना हुन्छन्। यो महत्त्वपूर्ण महत्वको छ कि यो जानकारी आज जारी गरिएको छ। यो समय तपाइँ आफैले कार्यमा लिने र तपाइँको परिवार, परिचितहरू वा साथीहरूसँग तपाइँको पुस्तकमा राख्ने समय हो। हामी अब उप्रान्त बस्न सक्दैनौं। पुलिस राज्यका ढोकाहरू बन्द भइरहेका छन् र ती सबै 'केयर' र 'सहयोग' को मैत्री जैकेटमा हुन्छन्।
तलको प्रचार फिल्मले कसरी एकाग्रता शिविरहरू (जुन अहिले नेदरल्याण्डमा धनी छन्) लाई मायालु र स्याहार प्रदान गरिएको छ भनेर देखाउँदछ। सफा अभिनय, यो सबै धेरै बाँझो र मायालु छ कि छाप दिन्छ। तपाईंले अभिनेताहरू र तपाईंको जेलको बारको सुन्दर प्रकाश र राम्रो डार्क टिन्ट गरिएको मान्छेको मीठा उत्पादनको साथ यसलाई सेट अप गर्नुभयो। (भिडियो अन्तर्गत हेर्नुहोस् र पढ्नुहोस्)
"40 /" 45 शासनलाई फासीवादको कडा पक्ष देखाउन आवश्यक थियो। त्यस युद्ध पछि, हाम्रो आफ्नै राजकुमार बर्नहार्डले स्थापना गरेको बिल्डरबर्ग समूहको पहलमा एडोल्फ हिटलरलाई मद्दत गर्ने र समर्थन गर्ने पावर ब्लकको कार्यलाई निरन्तरता दिइयो। हिटलरलाई योजना अनुसार नै फिल्ड खाली गर्न सक्षम हुनको लागि अग्रिम सत्तामा आउन अनुमति दिइयो, ताकि उनको उदय र पतनको पछाडि उही शक्ति क्षेत्रले लोकतान्त्रिक र बजारमा समान फासिस्ट आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई प्याकेज गर्न सक्दछ। त्यो Ebu सुपर राज्यतर्फको रोडम्याप ती पहिलो बिल्डरबर्ग बैठकहरूमा काम गरिएको थियो।
दशकहरू बितिसकेको छ, तर एकाग्रता र पुन: शिक्षा शिविरहरू जो सुपरस्टेटको विचारहरूसँग असहमत हुन्छन् उनीहरूसँग ठूलो मात्रामा भर्न तयार छन्। त्यो चाँडै नै ती सबै व्यक्तिहरू हुन् जो ठीक ब्रान्ड (अंग्रेजी: 'दायाँ-वि'्ग') मा जोडिएको हो सावधानीपूर्वक कठोर ब्रान्ड निर्माणको माध्यमबाट र ती ब्राण्डलाई आकार दिएका ती तेजस्वी राजनीतिक नेताहरूसँग जोडिएका छन्। मा यो लेख डोनाल्ड ट्रम्प, बोरिस जोनसेन र (नेदरल्याण्ड्स) थाइरी बाउडेट जस्ता राजनीतिज्ञसँगको त्यो सम्बन्धलाई म कसरी व्याख्या गर्दछु। मेरोमा नयाँ पुस्तक म यसमा विस्तृत वर्णन गर्नेछु। निकट भविष्यमा आर्थिक अस्वस्थता सिर्जना गरेर र अराजकता सिर्जना गरेर, तपाईं 1x मा त्यो सम्पूर्ण समूहसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। अबदेखि, आलोचनात्मक सोच त्यस्तो चीज हो जसलाई पुन: शिक्षा आवश्यक पर्दछ। त्यसोभए तपाईंसँग सम्भावित विपक्षी विद्रोही व्यवहार विकार छ। हो, साँच्चै! त्यो "डिसअर्डर" को परिभाषा पहिले नै स्थापित भइसकेको छ। को मनोविज्ञानहरू पहिले नै त्यहाँ छन् तयार
तपाईको वरिपरि के भइरहेको छ हेर्नका लागि यो समय हो। सबै कानून र नियमहरू त्यहाँ तपाईंको सुरक्षाको लागि छैनन्, तर तपाईंको विरुद्ध विकसित विकसी फासिस्ट सुपरस्टेट (मिठो कोटमा: भेडाको लुगामा ब्वाँसो) लाई जोगाउन; जनताको बिरूद्ध। मानिसहरूले 'हेरचाह गर्नेहरू' र 'पुलिस अधिकारीहरू' को पुस्तालाई तालिम दिन समय लिएका छन्। जे भए पनि युवासँग भविष्य छ र यदि तपाईले ब्रेन वाश गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले 'हेरचाह गर्ने' र 'एजेन्ट' को सम्पूर्ण सेना तल राख्न सक्नुहुन्छ जो विश्वस्त छन् कि ती सबै मानिसहरूलाई लक गर्नु राम्रो हो। दशकौं प्रोग्रामि via, शिक्षा, मिडिया र राजनीतिबाट अभिनय मार्फत दशकौंको परिणाम स्वरूप सामूहिक अन्धात्व छ। धोखाका सबै तहहरू मार्फत हेर्ने समय हो। यसैले म तपाईंलाई तुरून्त कल गर्न चाहान्छु, मेरो किताब पढ्न र यसलाई परिवार, साथीहरू वा परिचितहरूलाई दिनुहोस्। यो कागजमा छ र कागज इन्टरनेट भन्दा सेन्सर गर्न कम सजिलो छ।
अन्तमा तल भिडियो। यसमा तपाईले ती सबै बारहरू मध्ये एउटा देख्नुभयो जुन युरोपले ती सबै आक्रमणकारीहरूको बिरूद्ध आफूलाई बचाउन बनाएको हो। मेरो सुझाव छ कि तपाईं तलको भिडियोमा राम्रो हेराई राख्नुहुन्छ र त्यसोभए आश्चर्य छ कि यदि त्यहाँ त्यस्तो दिन आउँछ जब तपाईंले फासिस्ट शासनबाट भाग्नुपर्दछ, तर तपाईं कतै जान सक्नुहुन्न, किनकि ती सबै फेंसिंग त्यहाँ छन् र सबै समुद्रहरू तट गार्ड जहाजहरू, ड्रोनहरू र हेलिकप्टरहरूको साथ अनुगमित हुन्छन्। यदि तपाई साइकोन्स अगाडि आउँछ भने सहयोग गर्नुहुन्छ? के तपाईं सेल ढोका ह्याचको माध्यमबाट खाजा लिनु अघि राम्ररी तयार पिल मिक्स लिनुहुन्छ? वा तपाई सोच्नुहुन्छ कि यो यति चाँडो हुनेछैन?
स्रोत लिंक सुची: https: nporadio1.nl
ट्याग: वकील, BART, जर्मनी, EU, विशेष, फेन्सिंग, सहायता, ताज साक्षी, नाबिल बी, नाजी, मनोविज्ञान, Stapert, हेरविचार
14 नोभेम्बर 2019 मा 10: 53
स्पष्ट लेख फेरि मार्टिन, केवल दया कि ज्यादातर व्यक्तिहरु यसको गम्भीरता देख्दैनन्। यदि यो ढिलो हुनेछ र उडानहरू अब सम्भव भएन भने तिनीहरू भन्नेछन् ... जब यो सबै निर्णय गरियो र हामीले आउँदै गरेको देखेका छैनौं। सही अभिव्यक्ति तब हो ... हामी यसलाई आउँदै गरेको हेर्न चाहँदैनौं। यो तपाइँमा निर्भर हुँदैन, मेरो विचारमा त्यहाँ पर्याप्त चेतावनीहरू छन्।
14 नोभेम्बर 2019 मा 19: 06
हामीले पुलिसले कहिँ पनि आक्रमण गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई प्रयोग गर्नै पर्छ। धेरै नै पहरेदार र सधैं गम्भीर कारणको साथ .. वा ट्रेनमा एक आतंकवादी छ वा मोक्रो माफियाबाट कोही .. ग्र्यापरहस सायद फेरि आउने छन् (आफ्नो प्रकारको 65 पुरानो परम्परागत पूर्वी छिमेकी चश्मा पछाडि) राम्रोसँग स्थापित कारणको साथ:
14 नोभेम्बर 2019 मा 19: 16
डर अश्लील .. Gladio रणनीति। अनन्त शान्तिको लागि युद्ध। ती ती केटाहरूलाई, हाम्रो विश्व सुधारकर्ताहरूलाई धकेल्नुहोस्। हामी उनीहरू बिना कहाँ हुने थियौं?
15 नोभेम्बर 2019 मा 21: 53
अरु धेरै बढि! अधिक पुलिस भन्छ किनकि यो वास्तवमै आवश्यक छ !!
14 नोभेम्बर 2019 मा 10: 56
र तपाईं पछि बाहिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न ...
15 नोभेम्बर 2019 मा 11: 25
हो, यो योजना हो, अब EUROGENDFOR र Von der Leyen को साथ उनको ठाउँमा पूर्व Verteidigungsministerin को रूप मा। पोल्रोब्युरोबाट म्याक्रोन, टस्क र अन्य कठपुतलीहरू जसले वर्तमान नाटो निर्माण आदिलाई प्रश्न गर्दछन्
Wir kämpfen: Futsr Deutschland! र एउटा ठूलो यूरोप (चौथो रीक पढ्नुहोस्)
14 नोभेम्बर 2019 मा 16: 05
मैले देखेको जस्तै, हामी पहिले देखि नै तानाशाहीमा छौं, पुलिस पुलिस पनि। पहिले नै अहिले। जानुहोस् र आफ्नो तथाकथित अधिकार हेर्नुहोस्, प्रतीक कानून तपाईं राम्रो नाम राख्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरूलाई बिन्ती गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उदाहरण को लागी। तपाइँ अभ्यासमा पाउनुहुनेछ कि तपाइँ तथ्यहरू भन्न सक्नुहुन्न। र यदि तपाईं स्क्रिप्टबाट केटाको अगाडि हुनुहुन्छ भने, तपाईंको अधिकार उल्ल .्घन हुनेछ यदि परिणाम केटहरूको अनुरूप छैन, केटाहरूको नीतिसँग द्वन्द्व हुन्छ। प्रेस आमन्त्रित गरिएको छैन यदि यसलाई कभर गर्नु पर्छ भने। । लिपि न्यायाधीशबाट केटाहरूको अनगिनत फैसलाहरू छन् जुन तथ्य र कानूनमा मात्र गलत छन्। त्यो तानाशाही हो, त्यो मनमानी हो, कानूनी निश्चितता होइन। लिपि वकिलका केटाहरूलाई त्यो पनि थाहा छ, तर तिनीहरू लिपि स्थिति यस्तै केटाहरूका अंश हुन् र तिनीहरूले पनि पैसा कमाउँछन्। तपाईं स्क्रिप्ट कथनबाट केटाहरूको बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ। अपीलमा, cassation? तपाईं त्यहाँ स्क्रिप्ट न्यायाधीशहरूबाट केटाहरू भेट्नुहुन्छ। स्ट्रासबर्गमा मानवअधिकार युरोपियन अदालतको प्रयास गर्नुहोस्। हो, तिनीहरू लिपिका केटाहरू पनि हुन्। र सबै कुरा मापदण्डको आधारमा उनीहरू द्वारा निर्धारित गरिन्छ कि यो उनीहरूको रुचिमा छ कि छैन। यदि तपाइँ अर्को पार्टीको स्क्रिप्टबाट केटाको बिरूद्धमा कार्यवाही गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ लगभग निश्चित रूपमा हराउनुहुनेछ। यो वास्तवमै केटाहरूको कारण साधारण जनसंख्याको बारेमा तानाशाही हो।
14 नोभेम्बर 2019 मा 16: 39
म सहमत छु ... र अधिक महत्त्वपूर्ण यो छली सबै तहहरू मार्फत हेर्नु हो। तसर्थ त्यो पुस्तक।
14 नोभेम्बर 2019 मा 16: 53
बहिनी नाओमी हूगेविज पर्खाइ गर्न सक्दैन ... यस प्रकारको संस्थाले सद्दि, सोशियोपाथ र उस्तै विकृतिको लागि अपील गर्दछ।
14 नोभेम्बर 2019 मा 18: 49
यो मात्र एक धेरै राम्रो काम हैन? तपाईको केमा चिन्ता भइरहेको छ? यो "हेरचाह" हो! साँच्चै!
14 नोभेम्बर 2019 मा 19: 50
यो पनि राम्रो भुक्तानी! के तपाई राम्रो घर किन्न सक्नुहुन्छ? राम्रो माध्यमिक रोजगार अवस्था र यस्तै।
14 नोभेम्बर 2019 मा 20: 02
हो, म त्यो गडबड पनि बुझ्दिन! मद्दुरोडममा सेवा एक राम्रो नियोक्ता हो, चिन्ताको विषयमा केहि छैन
5 डिसेम्बर 2019 मा 01: 28
14 नोभेम्बर 2019 मा 19: 52
"ट्रान्सकल्चरल केयर" नाओमी हूगेविजको लागि राम्रो ठाउँ होइन कि? यो ट्रान्स संग के गर्न केहि छ ..
14 नोभेम्बर 2019 मा 20: 25
जस्तो तपाईले आफ्नो पुस्तकमा वर्णन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ मूलबाट सुरूवात (जुन यो दोहोरो संसारमा) वरिपरि छ। यो सबै पहिले भएको थियो, हामी देख्न सक्छौं अब यो माईल को लागी आउँदैछ। यो केवल द्वारहरू मात्र बनेका छैनन्, भिसा प्रक्रिया अवधिहरूको बारेमा कसरी? यी सबै भर्खरका वर्षहरूमा समायोजित गरिएको छ ता कि यो धेरै नै गाह्रो / टाढा हुन असम्भव छ। यो एक उडान करबाट सुरू हुन्छ र अर्को चरण अस्वीकार हो।
Zonnetje भने, यो डर अश्लील मा आधारित छ। यदि उनीहरूले हामीलाई साना केरामा राखे भने, जबसम्म हाम्रो मूललाई ​​हामी स्वतन्त्र हुन्छौं भनेर थाहा हुन्छ, यस संसारमा सबै थोक चल्दछ।
थप रूपमा, म रुचाउँछु कि तिनीहरूले मलाई पिंजरेमा राखे भन्दा मैले कसैलाई पिँडामा राखें। कुनै व्यक्ति जसलाई यस संसारले अगुवाइ गरेको छ वा उसको मौलिकको बिचमा भिन्नता छ!
यदि उनले यहाँ विजय प्राप्त गरे, तपाई सबै कुरा माथि उठ्नुहुनेछ।
14 नोभेम्बर 2019 मा 22: 31
होइन, हामी सबै पागल छौं। राज्य त्यहाँ आफ्नो नागरिकहरु को रक्षा गर्न छ। र अब जहिले पनि उनी असफल हुन्छिन्। कानून र कानूनको पछिको कसर पूर्ण रूपले नागरिकको हितमा छ ...
15 नोभेम्बर 2019 मा 00: 02
हो हो बिल्कुलै .. यो वास्तवमै प्रफुल्लित हो! एक खराब बी फिल्म अक्सर भीडको अन्तर्गत राम्रो गर्छ।
15 नोभेम्बर 2019 मा 07: 32
@ सूर्य, तपाईंले यसलाई सही राख्नुभएको छ र तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ।
के हुँदैछ हामी सबैले देख्न सक्दछौं, तर साधारण नागरिकको रूपमा तपाई यसको बारेमा धेरै गर्न सक्नुहुन्न।
हामी अ don्ग दाता नहुने निर्णय गर्न सक्दछौं, भोट नहुने, अरूलाई हानी गर्ने काम नगर्ने र यसको बारेमा छ।
आपत्ति, मुद्दा दायर, अपीलमा,? कसाईले आफ्नै मासुको निरीक्षण गर्दछ, जसले भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्दछ।
तपाईले स्क्रिप्टबाट केटा विरुद्ध कुनै पनि कुरा सुरु गर्नुहुन्न।
15 नोभेम्बर 2019 मा 07: 46
म भन्छु: किताब पढ्ने समय भयो र फेरि हेर्नुहोस् जुन यो तपाईं सोच्नुहुन्छ भन्दा अझ उज्यालो देखिन्छ। तपाईं वास्तवमै केहि गर्न सक्नुहुन्छ!
15 नोभेम्बर 2019 मा 12: 34
स्क्रिप्टमा केटाहरूको बारेमा मैले के कुरा भनेको कच्चा वास्तविकता हो। यसको पक्कै पनि यसको मतलब केहि पनि गर्न सकिंदैन भन्ने होइन। केहि गलत, अशुद्धता, अन्याय र अन्याय हो भने पत्ता लगाउन सुरू गर्नुहोस्। भावनाहरूको अनुभव गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई दमन नगर्नुहोस्। यसमा तपाइँको दिमाग राख्नुहोस्। तपाईको भावनाहरुलाई अभिभूत नपार्नुहोस्। केटाहरूले भावनाहरू मन पराउँदैनन्, सबै दब्न पर्छ कि उर्जा, प्रेरणा। तिनीहरू ओब्जेक्टिफिकेशनका लागि जान्छन्। यदि केहि भनिएको छ वा गरेको छ, जहाँसुकै वा जुनसुकैबाट, पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोस् यदि ती स्क्रिप्टमा केटाहरूको स्रोतबाट आएको हो। तपाईंले व्यवहार गरिरहनु भएको मानिसहरूलाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस्, यो पनि ती मध्येका एक हो। समान दिमागका मानिसहरुलाई एक पछि अर्कोमा सूचित गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्, र एक अर्कालाई नियमित रुपमा प्रेरित गर्नुहोस् र हामी हामी किन स्थितिमा छौं भनेर व्याख्या गर्नुहोस्। होशियार रहनुहोस् किनकि केटाहरूले पनि आफूलाई समान विचारको रूपमा मास्क गरेका छन्! तिनीहरू साँचो चमालेहरू हुन्।
त्यहाँ उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा छ तर तिनीहरू यस साइटमा पढ्छन्।
19 नोभेम्बर 2019 मा 00: 17
समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान को अर्को महान उदाहरण।
केहि फुटबल खेलको दौरान यति अपमानजनक मन्त्रहरू समाचारमा व्यापक रूपमा रिपोर्ट हुन्छन्। PRS खेल एक सास मा बोल्दछ।
समस्या: मन्त्र गर्दछ तर कसले सहि पहिचान गर्न सक्दैन
प्रतिक्रिया: लाज! ती मानिसहरूलाई सजाय दिनै पर्छ!
समाधान: फुटबल खेलहरूमा अनुहार पहिचान गर्नुहोस्
18-11-2019 को मिनेट4बाट "एक आज" कार्यक्रमको प्रसारण तल हेर्नुहोस्: 20
के यो संयोग हो कि "विशेषज्ञ" को कपडाले मलाई गोरिल्लाको सम्झना गराउँछ ??? म अझै पनि त्यो डरलाग्दो ठट्टा :-p बुझ्न सक्छु
« रोबर्ट जेन्सेनको "डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ विश्व अर्डरमा विश्वास गर्दैनन्" भनेर प्रमाणित गर्दछ: जेन्सेन.एनएल नियंत्रित विपक्षमा छन्
संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र '90 देखाउँदछ: विश्व सरकारको कार्यान्वयनका लागि मौसम उपायहरू आविष्कार गरियो »
कुल भ्रमण: 14.543.902